UMlawuli kunye noMlawuli
I-Capricorn kunye neCapricorn inokubambisana nokuqonda okunzulu okanye ukuvalelwa rhoqo kweempondo.
Inokwenzeka ukuba, kuya kuba ngumxube owanelisayo kubo bobabini. Emva koko, iCapricorn, uphawu lwekhadiyali elichaphazelayo, luya kutyhafaza kwaye lulahlekelwe intlonelo kumthandi onamahloni.
Ukujonga kwisibuko seCappy, bayakuphepha imidlalo yokutshatisa ezinye iimpawu. I-Capricorn ilawulwa nguSaturn kwaye inentsika. Baye bacinga ixesha elide kwaye kaninzi lo lubuhle obuhle-bubavumela ukuba bakhe izakhiwo ezihlala njalo kunye nobudlelwane.
Baya kugcina i-facade esemthethweni baze baqiniseke ukuba uyahamba. Akunakunqandwa yinto yokuziphatha. Bobabini baxabisa ukugcina izinto zikhanya, ngeentlanganiso ezimfutshane kude kubekho isiseko sokwenza okungakumbi.
Naturals kwi-Physical Intimacy
Njengomqondiso wehlabathi, uCappy unokwemvelo xa kuziwa kubuhlobo obusondelene. Bayixabisa ubulili njengommeli othintekayo ekwakheni ubudlelwane babo.
Baya kuphinda kabini phantsi kwezinto zezinto zomhlaba , mhlawumbi ukuya kwinqanaba lokulibala. I- Capricorn (i-Sun) ihlala ifumana umthandi onomdla ngokuzihlaziya. I-Capricorn i-humor yobuqhetseba isoloko iyamangalisa.
I-Capricorn inothando yindabuko kwaye ngamanye amaxesha iinjongo zentsapho. Imfihlelo malunga nabo kukuba ezinye izilwanyana zomoya ziyi-Seagoat yengqungquthela. Ezinye ziyamangalisa.
AmaCapricorns bathanda ukuziva belawulwa xa bebathandana, ngoko kukho ukulwa kwamandla apha. I-Seagoat ayiyi kunciphisa kwi-confrontation, ikhulise amathuba okuba i-duel iphele kumdwebo.
Ngamnye akasayi kuba ngathi unesizungu, ekubeni i-Seagoat iyazi ukuba i-melancholy yangempela ihamba ngeemeko, ngamanye amaxesha i-morose, ingenakunzima. Bazi ukuba nini na ukushiya enye yedwa kunye nokuba nini ukukhupha omnye ngaphandle kwesidima.
Xa ithemba libavumela ukuba babelane ngeemfihlo zabo, uthando lokwenene luqala. Uvavanyo luya kuba ngamafu amnyama adlula kule miyoyo enzima.
Basengozini ekudaleni iipateni kwiintsebenziswano ezibahambisa phantsi. Baya kufuna ukuqiniseka ukuba badala ntoni ngokulinganayo namaxesha okukhanya.
Ubungqina kunye neApirations
I-Capricorn ngumqondiso ozama ukuphumelela, isimo kunye nobutyebi behlabathi. Kunceda amathuba abo ukuba zombini zizisa ingqondo yokunyuka kweentaba kulwalamano. Oku kuthatha uxinzelelo kwaye kwenza ukuba bathambekele kwezinye iindawo.
Xa sele zenziwe, iCapricorns inomdla wokubamba ndawonye. Abaphathi ababini bomhlaba wasezantsi benza amaqabane amakhulu kwi shishini lentsapho. Bacwangcisa ikusasa ngokuzinza kwemali kwingqondo baze bagcwalise ikhaya labo kunye nezixhobo ezingabikhoyo. Akunakuthandi ukuphosa izinto kwaye uya kuncedisa ukulungiswa kwempahla.
Ngaphaya: Iimpawu ezifanayo, i-mind setting-set, i-ambitious, i-resourceful, i-sensuous, ikhwalithi yothando ngobuninzi, izazinko, inyanisekileyo.
Ngaphantsi: Imimoya emnyama, inkulu kakhulu, ukuxhatshazwa kwamandla, ukulawula, konke ukusebenza ngomdlalo omncinci. Funda ngokubanzi ngokusemandleni malunga nomnyama omnyama weCapricorn ukwazi ukuba ungena ntoni.
Umgangatho kunye ne-Element: iKalidina (esebenzayo) Umhlaba (ukubonakalisa, ukungathandabuzeki)
I-Capricorn neCapricorn Love Story
Impumelelo kodwa engonwabileyo ...
"Ndiyatshatile indoda endiyithandayo, ndiyazi ukuba ndifanele nditshatile. Ndicinga ukuba ndicinga ukuba kwakuyithuba lam lokugqibela kwaye andingayi 30. Ndayingenangqondo into endiyintombi! Emva kweminyaka emininzi, uyandichukumisa ukuba ndikhule emkhatsini wam ngaphambi kokucwangcisa intsapho; ukuzinza kwezemali kubaluleke ngaphezu kwakhe kwintsapho kwaye kuba nabantwana, njengokuba kuya kuba ngumzuzu ogqibeleleyo Xa ndilinde ixesha elide, xa ndithe ndahlala ndikhungathekile, ndiyabonakalisa iimvakalelo. Ndiyifunayo. Uvakalelo lwengxakini luvutha ngaphakathi kwam, umnqweno wokunakekelwa kwenyama ufe phakathi kwam ngomsindo ofihliweyo kunye nomnqweno olahlekileyo wokuba naye.
Ndifuna indlela yokuphuma kuyo. Xa ndilinde ixesha elide, kuba kubi ngakumbi. "
Libra nge Libra: Uthando lwabo luhambelana
I-Venus Aquarius Uthando oluhambelanayo
Gemini nePisces: Uthando lwabo luhambelana
I-Aries ne-Scorpio: Uthando oluhambelanayo
I-Sun Conjunct Saturn ebudlelwaneni
Ziziphi iiNdinyana eziseJuz '2 zeQan?
Ukulinganisa Ubukhulu boqoqosho
Umbulali oyingqungquthela uMichael Ross, Umgxeki weNdlela
U-Oscar-uMninimzi uSandra Bullock Unomsebenzi omkhulu kunabo bonke
Umjaho wamaHhashi kunye namalungelo asezilwanyana - Yintoni engalunganga ngeMidaniso yeHahashe
I-Colorado Mesa University Admissions
Umzekelo woLwimi oluLwimi oluMkhulu lwesiFrentshi
Ukuhlaziywa kukaGeorge Orwell ka-1984